Xiaomi Mi Note 10 Pro wuxuu isticmaali doonaa Snapdragon 855 Plus | Androidsis
Maalmahan waxaan heleynaa war ku saabsan imaatinka suuqa ee Xiaomi Mi Note 10. Naqshad cusub oo ka mid ah heerka dhexe ee heerka Shiinaha, taasoo rasmi ahaan shaqeyn doonta wax ka yar laba toddobaad. Taleefan soo bixi doona gaar ahaan kamaradeeda, maadaama ay suurtagal noqotay in la ogaado. In kasta oo qalabkani uusan gaarin suuqa kaligiis, maadaama ay sidoo kale jiri doonaan Xiaomi Mi Note 10 Pro.
Tan ku saabsan Xiaomi Mi Note 10 Pro waxaa jiray warar yar, ama daadin, illaa iyo hadda. Waxay u muuqataa in isbeddelkani isbeddelayo, sababtoo ah xogta ugu horreysa ee ku saabsan qalabka ayaa bilaabmaya inuu yimaado. Mid ka mid ah xogta aan ognahay waa processor-keeda, kaas oo ballan qaadaya awood weyn.
Waxaa shaaca ka qaaday in processor-ka taleefankani wuxuu noqonayaa Snapdragon 855 Plus. Waa nooc xoogaa ka xoog badan processor-ka Qualcomm, oo aan aragno wax badan bilooyinkan, gaar ahaan qalabka ciyaaraha. Hadda Xiaomi Mi Note 10 Pro ayaa noqon doonta tan ku xigta ee adeegsaneysa processor-kaan.
Ma jiraan faahfaahin badan oo dheeri ah oo ku saabsan qaabka-dhamaadka sare. In kasta oo warbaahin kaladuwan ay soo jeedinayaan in processor-ku uu ka mid noqon doono farqiga yar ee u dhexeeya labadan moodal ee ay sumadda Shiinaha soo bandhigi doonto bishan. Ma garanayno inay sidan tahay ama haddii runti ay jiri doonaan kala duwanaan badan oo dhexdooda ah.
Waxaa la sheegay in Xiaomi Mi Note 10 Pro uu lahaan lahaa shaashad 6,7 inch oo AMOLED ah cabir ahaan Intaa waxaa dheer, baytarigeedu wuxuu lahaan lahaa taageero si dhakhso ah loogu soo oogo 40W. Kuwani waa faahfaahinta yar ee illaa hadda la helay, in kasta oo hubaal maalmaha soo socda inbadan ayaan ogaan doonnaa.
Waqtigan xaadirka ah dhacdada kaliya ee la xaqiijiyay ayaa ah tan Waxaa looga dabaaldegaa 12-ka Nofeembar dalka Poland. Waxaa la filayaa in dhacdadan labadaba Xiaomi Mi Note 10 Pro iyo Xusuusin 10 la soo bandhigi doono. In kasta oo ay ka sarreyso dhammaan noocyada caadiga ah ee kor loo qaadayo oo ay wax ka soo baxayaan, markaa waa inaan sugnaa inaan aragno haddii ay runti dhacdo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Xiaomi Mi Note 10 Pro wuxuu adeegsan doonaa processor-ka ugu awoodda badan suuqa
WhatsApp ayaa kuu oggolaan doonta inaad ku ciyaartid isjiidka Netflix adigoon ka bixin barnaamijka